Ungasibeka kanjani isiphequluli esizenzakalelayo ku-iPhone 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Uhlelo lokusebenza nezenhlalo
Ibhulogi leSims 4
Ungasibeka kanjani isiphequluli esizenzakalelayo ku-iPhone
Ngokufika kwesibuyekezo se-iOS 14 se-iPhone, kungenzeka ukuthi ushintshe uhlelo lokusebenza oluzenzakalelayo ukuvula amawebhusayithi kanye nezixhumanisi ngaphakathi kwama-imeyili, izingxoxo kanye nokuxhumana nabantu, ngaphandle kokudinga uhlelo lweSafari (ngaso sonke isikhathi isiphequluli esizenzakalelayo kukho konke Imikhiqizo ye-Apple). Lokhu kungabonakala kukuncane futhi kusobala, ikakhulukazi uma sivela ezweni le-Android, kepha amandla / ubuthakathaka obukhulu kakhulu be-Apple bekufanele ngenxa yesibopho esiqinile nezinhlelo zohlelo lwe-Apple, obekungenakwenzeka ukuthi zikushaye indiva ngokuphelele. Uma lokhu kungabonakala njengenzuzo yokugcina imvelo ye-Apple ingaguquguquki, ikhawulela kanzima inkululeko yomsebenzisi, empeleni ongakwazanga ukuvula izixhumanisi nesiphequluli asithandayo.
Umculo ubukeka ushintshile ngalesi sibuyekezo: ake sibone ngokubambisana ungasibeka kanjani isiphequluli esizenzakalelayo ku-iPhone, ukhetha phakathi kwezinye izindlela eziningi ezitholakala ku-App Store (kusuka kuGoogle Chrome ngeMozilla Firefox, Opera kanye nesiphequluli esingaziwa seDuckDuckGo).
Ezahlukweni ezilandelayo sizokukhombisa okokuqala ukuthi ungazihlola kanjani izibuyekezo zohlelo lwe-iPhone yethu futhi, kuphela ngemuva kokuthola i- Uhlelo lokusebenza lwe-iOS 14, singaqhubeka nokufakwa kwesiphequluli sethu futhi senze izinguquko ezidingekayo ukusenza isiphequluli esizenzakalelayo ku-iPhone yethu.
Ungayivuselela kanjani i-iPhone
Ngaphambi kokuqhubeka, sihlala sincoma lokho hlola izibuyekezo ze-iPhoneIkakhulukazi uma singakaqapheli noma yiziphi izinguquko zenguqulo noma izibuyekezo ezinsukwini noma ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Ukuvuselela i-iPhone, ixhume kunethiwekhi ye-Wi-Fi esheshayo (ekhaya noma ehhovisi), cindezela kuhlelo lokusebenza Ukuqinisekiswaake siye kumenyu General, siqhubekele phambili Ukuvuselelwa kwesoftware futhi, uma kukhona ukuvuselelwa, kufake ngokuqhubeka Landa futhi ufake.
Ekupheleni kokulanda siqala kabusha i-iPhone bese silinda ukuthi uhlelo olusha lokusebenza luqale; uma kungekho ukuvuselelwa ku-iOS 14 (mhlawumbe ngoba i-iPhone yethu indala kakhulu), asikwazi ukwenza ushintsho kusiphequluli esizenzakalelayo. Ngeminye imininingwane, sincoma ukuthi ufunde umhlahlandlela wethu. Ungayivuselela kanjani i-iPhone. Uma kunalokho sifuna ukushintsha i-iPhone yethu entsha noma ye-reconditioned kodwa ehambisana ne-iOS 14, sikumema ukuthi ufunde umhlahlandlela wethu Iyiphi i-iPhone okufanele ithengwe namuhla? Izinguqulo namamodeli kuyatholakala.
Ungasifaka kanjani noma ubuyekeze isiphequluli esivela eceleni
Ngemuva kokubuyekeza i-iPhone, sifaka isiphequluli sethu esiyintandokazi ngokuvula i-App Store nokusebenzisa imenyu Ukucinga, ukuze useshe i-Google Chrome, i-Mozilla Firefox, i-Opera Touch, noma isiphequluli se-DuckDuckGo.
Uma sesivele sinesiphequluli esisodwa noma eziningi ezifakiwe kwi-iPhone yethu, ngaphambi kokuqhubeka nesahluko esibaluleke kunazo zonke salesi sikhombisi, qiniseka ukuthi zibuyekezelwa enguqulweni yakamuva ngokuvula i-App Store, ngokucindezela isithonjana sephrofayli lakho phezulu ngakwesokudla ekugcineni ucindezela Vuselela konke. Ngabe siyazazi ezinye iziphequluli ezihlukile zeSafari? Singakulungisa lokhu ngokushesha ngokufunda umhlahlandlela wethu ku Iziphequluli ezihamba phambili yezinye izindlela ze-iPhone ne-iPad ze-Safari.
Ungasibeka kanjani isiphequluli esisha esizenzakalelayo
Ngemuva kokulanda noma ukuvuselela isiphequluli esivela eceleni ku-iPhone, singasibeka njengesiphequluli esizenzakalelayo sesixhumanisi ngasinye noma ikhasi lewebhu esizolivula ngokusiyisa kuhlelo lokusebenza. Ukuqinisekiswa, ukuskrola uze uthole igama lesiphequluli futhi, uma usuvulekile, cindezela kwimenyu Uhlelo lokusebenza lwesiphequluli oluzenzakalelayo futhi senze ukukhetha kwethu kulolu hlu.
Ukucindezela egameni lesiphequluli kuzobonisa uphawu lokuhlola, uphawu lokuthi isistimu ilwamukele ushintsho. Asisiboni isiphequluli sethu ohlwini noma into ayiveli Uhlelo lokusebenza lwesiphequluli oluzenzakalelayo? Sibheka ukuthi isiphequluli kanye nohlelo olusebenzayo lisesikhathini (njengoba kubonakale ezahlukweni ezedlule), ngaphandle kwalokho ngeke kwenzeke ukwenza noma ikuphi ukukhetha.
Ngalolu shintsho oluncane, i-Apple izama ukuphuma ebhokisini futhi isondele ekuguqukeni nasekusebenzeni okuhle okubonwe kunoma iyiphi i-smartphone yanamuhla ye-Android. Eqinisweni, nge-iOS 14 asibophezelekile ekusetshenzisweni kweSafari kusixhumanisi ngasinye esivulwe kuma-imeyili noma ezingxoxweni, esivumela ukuthi sisebenzise isiphequluli sethu esithandayo lapho kunesidingo. Lokhu kungabonakala njenge- "half revolution" noma kunalokho "i-evolution": I-Apple ibonile ukuthi abasebenzisi bayo abahlale bebophezelekile ezinhlelweni ezikhiqizayo nokuthi, ezimweni eziningi, basebenzisa iSafari kuphela ngoba uhlelo alwenzi. ungasebenzisa ezinye iziphequluli ngokuzenzakalela (manje okungenzeka nge-iOS 14). Ngaphezu kwesiphequluli, iswishi yohlelo lokusebenza oluzenzakalelayo iyatholakala nakwezinye izinhlelo zokusebenza zohlelo ezifana neMeyili: ngakho-ke, singavula ama-imeyili noma okunamathiselwe kwethu namanye amaklayenti ngaphandle kokusebenzisa izinhlelo zohlelo ezixhunyaniswe nemvelo ye-Apple ( ngokushesha kepha hhayi ngaso sonke isikhathi ezinemisebenzi eminingi).
Uma sifuna ukushintsha izinhlelo zokusebenza ezizenzakalelayo ku-smartphone ye-Android, sincoma ukuthi ufunde umhlahlandlela wethu Ungaziguqula kanjani izinhlelo zokusebenza ezizenzakalelayo ku-Android. Sivame ukusebenzisa ikhompyutha ye-Windows 10 kepha asazi ukuthi singaziguqula kanjani izinhlelo ezizenzakalelayo? Kulokhu singasiza ngezinyathelo ezichazwe kumhlahlandlela wethu. Ungashintsha kanjani izinhlelo zokusebenza ezizenzakalelayo ku Windows 10.
Asifuni ukushiya i-Safari ngaphandle kwesibhakabhaka noma sisayibheka njengesiphequluli esihle kakhulu se-iPhone? Kulokhu singaqhubeka nokufunda esihlokweni sethu Amaqhinga eSafari nezici ezingcono zesiphequluli se-iPhone ne-iPad, ngakho-ke ungafunda ngokushesha amaqhinga ahlukahlukene awusizo nemisebenzi efihliwe ukuze uqhubeke usebenzisa lesi siphequluli esizenzakalelayo.
Yimuphi opharetha weselula one-Intanethi esheshayo ku-4G LTE?
Ungalwenza kanjani uhlu lwadlalwayo ku-YouTube
Ungaxhumanisa kanjani i-Alexa nezibane
Ungawulalela kanjani umculo kumawashi ahlakaniphile (i-Android, i-Apple namanye)
Ungayifaka kanjani i-TV kumodi yokulinda
Ukwenza umculo omusha ngobuhlakani bokufakelwa
Izinhlelo zokusebenza zomenzi wesilayidi ezihamba phambili ze-Android ne-iPhone
Izici ezihamba phambili ze-Android 11 - Ungazithola Kanjani Kunoma iyiphi Ifoni
Ungayibuka kanjani i-Mediaset Play ku-TV
Ungawasusa kanjani amakhukhi ku-Chrome, Firefox, Edge nakuSafari
Ama-SmartBands ahamba phambili, ayonga futhi asebenza njengewashi elihlakaniphile
Ungayihlela kanjani ividiyo kuTikTok
Ungayivula kanjani i-bootloader ku-Xiaomi
I-Tic Tac Toe
Guqula ividiyo ibe yi-MP4 iye kwi-DVD ne-DVD iye ku-MP4
Ithebhulethi yesikole: iyiphi okufanele uyikhethe
Sebenzisa umhumushi osheshayo wetolika: I-Smartphone noma amadivayisi ukuthenga
Ezinye izindlela ze-TeamViewer zosizo olukude
Isaziso sezomthetho nokusetshenziswa
Uma uqhubeka nokusebenzisa leli sayithi wemukela ukusetshenziswa kwamakhukhi. Imininingwane Ngini